GAAR AH UBAX AMA ZEPHYRANTHES: ISKUULLADA DARYEELKA GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Zefirantes (ubaxyada sare): sida loo daryeelo
Zefirantes waxay yimaadeen guryahayaga Waqooyiga, Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Magaca ubaxa wuxuu ka yimid Giriig, erayada "Zephyr" - ilaahii hore ee Giriigga ee dabaysha reer galbeedka, iyo "anthos" - "ubax". Dadku waxay sidoo kale ugu yeeraan "ubaxa roobka" ama "kor u kac", sababtoo ah horumarinta degdegga ah ee peduncle - laga soo bilaabo dhulka ilaa ubax.
Zephyranthes waxaa iska leh qoyska Amaryllis, tirinta ilaa 90 nooc. Gobolada diirran, waa caado ah in ay ku koraan beerta furan, halkanna waxay ku qaadatay xidid ahaan wax aan qabyo ahayn oo lagu qurxiyo guriga.
Aagahayaga, ugu badnaan waa lix nooc oo ah zephyranthes:
Zephyranthes cad, ama caddaan ah (Zephyrantes candida), ayaa lagu kala soocay cadaanyo cadcad oo ku yaal barafka ilaa 20 cm. Guluubku wuxuu ku wareegsan yahay oo wuxuu gaadhaa dhexdhexaad ah 3 cm. Ubax wuxuu bilaabmaa bartamaha xagaaga waxaana uu socdaa ilaa Oktoobar.
Ma taqaanaa? Ubax kasta oo zephyranthes Blooms ka badan 2 maalmood, laakiin haddii ay jiraan nalal badan oo dheri, ka dibna ku farxi ubaxu wuxuu noqon karaa waqti dheer.
Atamas (Zephyrantes atamasca) wuxuu jecel yahay qolalka qaboobaha iyo walbahaarka laga bilaabo Maarso ilaa Abriil. Nalalka ilaa 2 cm, ukunta-qaabeeya, caleemaha waa dheer, cidhiidhi ah, midab madow mugdi ah, ubax cad, 3-4 cm dherer.
Zefirantes xoogan, ama awood leh (Zephyrantes robusta), waxaa lagu kala soocaa ubaxyo casaan fudud, gaaraya 6 cm Guluubka waa 4 cm dhexroor. Waxay ku duugmaysaa laga bilaabo Abriil ilaa Luuliyo. Mid ka mid ah wakiilada ugu weyn ee noocyada, asal ahaan ka yimid Brazil iyo Argentina.
Golden (Zephyrantes aurea) waxay leedahay caleemo dhuuban, caleemo dhaadheer, ilaa 30 cm, caleenta jaalaha ah laga bilaabo bilawga jiilaalka illaa iyo February. Waxay diyaarisaa qolal qabow.
Large-flowered (Zephyrantes grandiflora) wuxuu leeyahay qiyaasta qiyaastii ilaa 3 cm ee dhexroor, caleemo qadhaadh ah ilaa 30 cm iyo width of 0.5-0.7 cm, wuxuu kala-soocaa bilaha Abriil ilaa Luuliyo. Kala duwanaanshahan, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo xilliga hurdada laga bilaabo Sebtembar ilaa Bisha Febraayo, marka aan la sii deynin, caleemaha ayaa la gooyaa oo waxaa la geliyaa jiilaalka qol qabow, sida maqaasiinka ama qaboojiyaha.
Dhexdhexaadin (Zephyrantes versicolor) waxaa lagu kala saaraa xaqiiqda ah in peduncooyinka ay ka muuqdaan caleemaha ka hor, iyo ubaxyadu waxay leeyihiin midab qurux badan - caddaan dusha sare, gudaha iyo dibedda, agagaarka peduncle, casaan-cagaaran. Waxuu Bloomsameeyaa Janaayo oo wuxuu jecel yahay qaboojinta sidoo kale.
Ma taqaanaa? Ubax aan caadi ahayn, oo deggan Andes, oo loo yaqaan "Puya Raymond" kaddib markii uu gaarey 150-guuradii 150-kii, oo geeriyooday ka dib.
Xaaladaha ugu fiican ee koritaanka guriga
Inkasta oo aysan qabin qabow, dhirta waxay noqon doontaa mid caafimaad leh oo aad u fara badan oo ay ku buuxinayaan fulinta shuruudaha fudud ee iftiinka iyo heerkulka.
Dhirta ugu badan ee aan qabyo ahayn waxaa ka mid ah: chlorophytum, sansevieriya, caktus, hibiscus, hoya, spathiphyllum.
Ubaxa inta lagu jiro xilliga sii kordhaya iyo ubax waxay ku faraxsan yihiin iftiinka qorraxda iftiinka. Xilliga xagaaga, si sahlan ayaa loogu soo degi karaa balakoonka ama dhulka furan. Iyo gudaha, dooro dariishada iftiinka u ah: koonfurta, galbeed ama bari. Laakiin waxaa jira noocyo ka dillaacay caleemaha xilliga qaboobaha waxayna u baahan yihiin inay nastaan, sababtoo ah waxay ku jiraan qolka mugdiga ilaa guga.
Zefirantes waxaa loo tixgeliyaa gabi ahaan xero daryeel guri, heerkulkuna wuxuu ku habboon yahay bini-aadanka.
Heerkulka xagaaga ee ugu wanaagsan - 19-24 ° C, iyo xilliga nasashada inta ku filan 10-12 ° C, laakiin halkan waa muhiim inaanad dhaafin oo aan hoos u dhigin heerkulka ka hooseeya 5 ° C, haddii kale dhirku wuu dhimanayaa.
Iskuullada daryeelka guriga
Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee isdabajoogga iyo la'aanta koritaanka zephyranthes waxay noqon kartaa waraabin aan habboonayn ama bacriminta aan lahayn. Sababtoo ah waa muhiim in la ogaado sida loo daryeelo ubaxa.
Geeddi wuxuu jecel yahay waraabinta badan ee xagaaga, iyo inta lagu jiro xilli sii kordhaya iyo ubax. Laakiin uma baahnid inaad buuxiso oo aad u oggolaato qoyaan joogta ah dheriga.
Biyaha ubax marka dhulku dhererkiisu yar yahay. Xilliga jiilaalka iyo xilliga nasashada, biyaha ayaa si buuxda loo joojiyaa si looga fogaado lakabyada nalalka, iyo bilawga guga, ama dhammaadka Febraayo, marka caleemo cusub soo baxaan.
Waa muhiim! Inta lagu jiro muddooyinka qallalan qaas ahaan, sunta jilicsanaa si joogto ah biyo nadiif ah.
Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya iyo ubaxa Zefirantes waxaa la quudin jiray bacriminta guud ee bacrimiyaha 2 asbuuc kasta sida ku qiyaasta qiyaasaha uu soo saaro soo saaraha.
Xeerarka bedelka: carrada iyo dheriga
Marshmallow daryeel waa mid sahlan, tani waxay sidoo kale khuseysaa inuu ku tallaalo. Nidaamkan waxaa la sameeyaa sanadkiiba dhamaadka xilliga nasashada, inta badan guga. Dheriga waxa la doortaa maaha mid ka weyn kan hore, waa ka fiican yahay haddii dhoobo iyo hooseeyo. Ubaxku wuxuu noqon doonaa kuwo badan oo lagu qurxiyo iyo canjeer haddii aanad beeran mid ka mid ah basasha hal dheri, laakiin dhowr, oo dushooda 1/3 ka sareeya dhulka.
Fayraanta beerto waa inay noqotaa dabacsanaan, oo lagu dari karo qadar cuf, ciid caleen iyo humus. Dheecaan wanaagsan ayaa la dhigayaa xagga hoose si looga fogaado lakabaadda nalalka.
Faafinta nalalka gabadha
Faafi marshmallows xaaladaha qolka - sida fudud sida. Guluubka hooyadu wuxuu ka kooban yahay 15 carruur ah, oo si sahlan loo kala sooco. Ku dhaji xafiiska waa in lagu rusheeyaa dhuxul iyo qaliinka nalalka dhar gooni ah. Haddii guluubku sarreeyo, markaa qoorta ayaa laga saari karaa wax yar ka sarreeya heerka dhulka. Ubax ka yaryahay ilmo yar ayaa xayeysiiya sanadka soo socda.
Waa muhiim! Ka dib markii transplanting toddobaadkii geedka ha cabin, ama ku rusheey dhulka dhulka waxoogaa biyo ah, haddii kale nalalka ayaa laga yaabaa inuu qudhmo.
Dhibaatooyinka suurtagalka ah: cudurada iyo cayayaanka
Aan aragno sababta ay xaaladaha qolka uusan uhogal u lahayn zephyranthes, ama baxa oo koraa si liidata.
Geedku waa mid deggan oo ka dhan ah cudurrada, laakiin cayayaanka noocan oo kale ah ayaa soo bixi kara:
Caarada caarada Hawada qallalan ee guriga ayaa gacan ka geysta horumarinteeda. Doolwanaag ayaa ka muuqda caleemaha iyo burooyinkeeda, way dillaacaan waxayna dhici karaan waqti dambe. Ku xoqidda biyo saabuun leh iyo qubeys dheeraad ah ubaxa qubeyska ayaa ku caawin kara marxaladaha hore ee cudurka. Haddii geeddi-socodka ay sii xumaato, ka dib Acartell, oo ah xakamayn faafin ah, xalka 0.15%, ayaa ku caawin doonta.
Qiyaasta amarylliska waa yar tahay, illaa 3 mm, cayayaanka caddaanka ah ee cadaanka ah, ka dib weerarka kaas oo ubaxu uu dhinto, caleemuhu waxay noqdaan huruud iyo dayr. Baaqyada cayayaankan ayaa kicin kara muuqaalka mugdiga madow, taas oo aad uga khatar badan daadadka laftiisa. Waxaad u baahan tahay inaad la dagaalanto cayayaanka la xaqiijiyay, sida "Aktara", "Fitoverm", "Aktelli".
Gaashaanku waa muraayado yar yar oo cayayaanka leh oo ku faafa geedka oo dhan, quudinta joodariga. Ubaxa wuxuu ku jiraa xaalad caadi ah oo niyadjabsan, caleemaha cawska ah iyo wadajirta qallalan. Waxay sidoo kale la halgamaysaa cayayaanka kor ku xusan.
Dhirta gudaha, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo daawooyinka sida "Gamair", "Trichodermin", dareeraha Bordeaux, "Alirin", "Green Soap", "Fitosporin", "Albit", "Abiga".
Zefirantes waxaa lagu magacaabi karaa jecel ee bannaanka u badan, sababtoo ah iyada oo habka saxda ah ee beerto iyo daryeel dheeraad ah, waxay noqon doontaa waqti aad u dheer si aad uga farxiso ubax badan oo dhalaalaya.